७ सय रुपैँयाबाट सुरु गरेको गुल्मीको सहकारीको कारोवार अहिले ५० करोड रुपैँया – Gulmiews
७ सय रुपैँयाबाट सुरु गरेको गुल्मीको सहकारीको कारोवार अहिले ५० करोड रुपैँया
२५ भाद्र २०७३, शनिबार १९:३५ Sanju Kauchha
गुल्मी,भाद्र २५ । देशकै उत्कृष्ट सहकारीका रुपमा सम्मानित यहाँको एक सहकारी संस्था अहिले झण्डै ५० करोडको कारोवार गर्न सफल भएको छ । आज भन्दा २६ वर्ष अघि तम्घासका रमेश थापा अध्यक्ष र सचिव मुुकुन्दहरी गौतम सचिव सहित २६ जनाले मासिक ३० रुपैयाँका दरले जम्मा ७ सय २० रुपैयाँबाट सुरु गरेका थिए ।
जति वेला यहाँका कतिपयलाई सहकारी भनेको के हो ? भन्ने कुरा समेत थाह थिएन् संस्थापक सचिव गौतमले भने आज २४ ÷२५ करोडको कारोवार गर्ने अवस्थामा आई पुगौंला भनेर कल्पना समेत गरेका थिएनौं ।’ २०६३ सालमा देवबहादुर वस्नेत अध्यक्ष रहेको बेला राष्ट्रिय सहकारी संघले लेकाली स्वाबलम्वन ऋण तथा बचत सहकारी संस्थालाई देशकै उत्कृष्ट सहकारीका रुपमा पुरस्कृत गरेको थियो ।
व्यवस्थीत र बैंकिङ्ग सेवा सहित सदरमुकाम तम्घासमा सञ्चालित यस सहकारीमा १६ सय शेयर सदस्य र नावालक सदस्य ७ सय ११ रहेका छन् । २६ वर्ष अघि गठन भए पनि २०४८ सालमा दर्ता भएको यस सहकारीले शनिवार २४ औं वार्षिक साधरण सभा सदरमुकाममा भव्य रुपमा सम्पन्न गरेको छ ।
साधरण सभामा सचिवको प्रतिवेदन प्रस्तुत गदै सचिव भुवनप्रसाद अर्यालले यस आर्थिक वर्ष २०७२ ÷०४७ मा ४९ करोड ५९ लाख ३३ हजार ४ सय १७ रुपैयाँ ८० पैसा कुल कारोवार भएको जानकारी दिए । उनले सम्पत्ती दायित्य तर्फ यस आर्थिक वषमा २४ करोड ७२ हजार ६ सय ४९ रुपैयाँ ४१ प्पैसा रहेको बताए ।
कोषाध्यक्ष गणेश श्रेष्ठको प्रतिवेदनमा यस आर्थिक वर्षमा व्याज आम्दानी ऋण लगानीबाट २ करोड २२ लाख ४५ हजार ४ सय ४१ भएको उल्लेख छ । बैकबाट प्राप्त व्याज मात्रै यस वर्ष १३ लाख २२ हजार ८ सय ३५ रुपैया १३ पैसा भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा ७ सय ७३ जना सदस्यलाई २० करोड ८६ लाख ४० हजार ऋण लगानी गरिएको अध्यक्ष गोपला प्रसाद पन्थीले जानकारी दिए ।
यस आर्थिक वर्षमा ६ सय ३६ जना सदस्यहरुबाट १५ करोड १२ लाख ११ हजार ८ सय १० रुपैयाँ ऋण अशुली भएको उनले बताए । यस सहकारी संस्थाले गरिव विपन्न, असाहय र एकल महिलाहरुलाई आत्मानिर्भर बनाउनका लागि ऋण लगानीलाई बिेशेष प्राथामिकता दिने गरेको छ । यसबाट यहाँका थुप्रै त्यस्ता वर्गहरु उन्नतीको मार्गमा हिड्न थालेका छन् । जिल्ला न्यायधिश मातृकाप्रसाद मरासनीनले उद्घाटन गरेको साधरण सभामा उनले यस सहकारीले गरेको प्रगतीको खुलेर चर्चा गरे । उनले भने प्रतिवेदनमा यस सहकारीको प्रगती विवरण देख्दा म सहकारी प्रति निकै उत्साहित भएँ, यहाँहरुलाई बधाई छ ।’
साधरण सभामा प्रवेशिका परिक्षा र स्नातकमा उत्कृष्ट नतिजा लिएर उर्तिण हुने शेयर सदस्यका छोरा छोरी , बृद्धा–बृद्धा , एकल महिला, ऋण लिएर उत्कृष्ट व्यवसाय गर्ने शेयर सदस्य र सञ्चार क्षेत्रबाट सहकारी विकासमा महत्व पुर्ण योगदान पुराउने लगायतलाई सम्मान समेत गरिएको छ ।
यो सहकारी जिल्लाको सवै भन्दा पुरानो अनुशरणीय सहकारी मानिन्छ । यसले आफ्ना शेयर सदस्यलाई मात्र फाईदा पुराएको छैन् राज्यको समेत आम्दानीको श्रोत बनेको छ । यस वर्ष मात्रै राज्यलाई उसले १३ लाख २ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ कर तिरेको छ । साधरण सभामा विभिन्न सहकारी तथा अन्य संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरुले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।
अध्यक्ष गोपालप्रसाद पन्थीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन सत्रमा उपाध्यक्ष गोपालप्रसाद पाण्डेको स्वागत मन्तव्य र सचिव भुवनप्रसाद अर्यालको सञ्चालन रहेको थियो । उद्घाटन सत्र सकिए लगत्तै बन्द सत्र सुरु हुने अध्यक्ष पन्थीले जानकारी दिए ।
सहकर्मी सुनार सम्मानित
सहकर्मी प्रेम सुनार शनिवार गुल्मीको एक संस्थाद्धारा सम्मानित भएका छन् । लेकाली स्वाबलम्वन ऋण तथा वचत सहकारी संस्था तम्घास गुल्मीले सुनारलाई सम्मान गरेको हो । सुनारले पत्रकारिताको माध्यामद्धारा सहकारीको विकासमा महत्वपुर्ण योगदान गरेको भन्दै सो संस्थाको २४ औं साधरण सभाको अवसरमा नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरेको छ । साधरण सभा उद्घाटन सत्रका प्रमुख अतिथी जिल्ला न्यायधिश मातृकाप्रसाद मरासनी र सो संस्थाका अध्यक्ष गोपालप्रसाद मरासनीले सुनारलाई नगद पुरस्कार र सम्मान पत्र सहित सम्मान गरेका थिए ।
Comments comments	मिल्दाजुल्दा शिर्षकहरु:	यसरी घट्छ ३६ प्रतिशतको ब्याज दर ६ प्रतिशतमा, सयकडा ५० पैसाका दरले ऋण...	२७ आश्विन २०७३, बिहीबार २३:४८	गुल्मीमै बन्न थाल्यो वाईन, जुस र जाम...	१८ आश्विन २०७३, मंगलवार २१:१८	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	नेपालका वनमा काम गर्ने श्रमिकलाई कानुनले देख्दैन